Safaaradda Soomaaliya ee South Africa oo qabatay Koob loogu magac daray Isdhexgalka Umadaha “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Safaaradda Soomaaliya ee South Africa ayaa qabatay cayaaraha kubadda ee loogu magac daray isdhexgalka Umadaha oo ay wada ciyaareen Kooxo Soomaaliya iyo Uganda kala matalayay, waxaana lagu qabtay magaalada Pretoria ee dalkaasi.
Kooxahan oo ka koobnaa afar Kooxood ayaa ka kala socday Magaalooyinka Pretoria iyo Restenburg oo ay Soomaalida ku badantahay waxeyna ahayd ciyaartii labaad ee ay Safaaradda taabba galiso.
Ciyaarahan oo lagu qabtay Magaalada Pretoria ayaa waxaa ka qeybgalay Uqeybsanaha Xafiiska Hiddaha iyo Tacliinta,Mudane Cabdi Xalane Xirsi, Xoghayaha Koowaad,Mudane Ismaciil Cabdalle Soomane iyo Danjire Jamal Barrow iyadoo Kooxahii ka qeybgalay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan.
Danjire Jamal Barrow oo furay Ciyaaraha ayaa sheegay inay wax wanaagsan tahay in is dhexgal Umadaha la sameeyo maadama ay ku noolyihiin K/Afrika Umado kala duwan oo u badan Qaaradda Afrika.
“Waxaan idinku dhiiragalinayaa inaad midowdaan dhinacayada Ciyaaraha iyo dhinac walba,waxaan jeclahay inaan halkaan ugu mahadceliyo Madaxa Hidaha iyo Dhaqanka oo suuragaliyay Ciyaarahan waxaan idin rajeynayaa guul Tartankiina wuu furanyahay”ayuu yiri Danjire Jamal Barrow.
Ciyaaraha oo socday hal maalin ayaa waxaa wada ciyaaray sedex Kooxood oo Soomaali ah iyo hal Koox oo Ugandes ah waxaana Koobka qaaday Kooxdii matalaysay Dalka Uganda.
Xarbi Cabdi Xasan gudoomiyaha Kooxda laga badiyay oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Kooxdiisu soo bandhigtay ciyaar wanaagsan isla markaana ay ku hormartay Goolal balse nasiibku aan saacidin sidaasna loogu qaaday guusha.
Cabdi Xalane Xirsi Uqeybsanaha Hidaha iyo Tacliinta ee Safaaradda oo Xafiiskii soo qabanqaabiyay ayaa isagane sheegay in markii labaad ay Safaaradda qabato Ciyaaro noocani ah si buu yiri loo helo isdhexgal wanaagsan.
Ciyaarahan ayaa ahaa kuwa aad u soo jiitay dad weynihii daawanayay waxayna kusoo idlaatay jawii farxadeed.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka waramay xaaladda Beledweyn